Naya Bikalpa | दलितको पहिचान कहिले सम्म अस्वीकार गर्ने ? - Naya Bikalpa दलितको पहिचान कहिले सम्म अस्वीकार गर्ने ? - Naya Bikalpa
दलितको पहिचान कहिले सम्म अस्वीकार गर्ने ?
प्रकाशित मिती: २०७७ जेष्ठ १६, १४: ५४: ४२
रुकुम पश्चिममा भएको घटनाले स्तब्द बनाएको छ । कथित तल्लो जाति भएकै आधारमा कलिलो उमेरमा ज्यान गुमाए नवराजले। जीवन के हो भन्ने बुझ्न नपाउँदै अकालमा उसले ज्यान गुमाउनु पर्यो। तर उसको मृत्यु नियतिको खेल होइन मानवता मरेको समाजको कारणले भएको हो । उनको मृत्युको कारण बन्यो उसको जात- बिक । आफु बिक हुदा हुँदै पनि मल्ल केटीसंग प्रेम गर्नु र उसलाई आफ्नो जीवन संगिनी बनाउन चाहनु उसको मृत्युको कारण बन्यो, मानवता नभएको समाजका कारण । यो घटनाले म यहि समाजको सदस्य हुँ भन्न पनि हिनताबोध भैराखेको छ । जातभात र छुवाछुतको आधारमा २० बर्षिय युवकको ज्यान लिने यो समाजलाई के भन्ने ? यस्तो समाजको निन्दा गर्न शब्दको कमि महसुस भैराखेको छ ।
नेपालमा २०६८ सालमै छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको विधयक पारित भैसकेको छ भने नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २४ ले छुवाछुत र विभेदको विरुद्धको अधिकारको सुनिश्चता गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले उसको जात, समुदाय, काम अथवा शारीरिक अवस्थाको आधारमा विभेद भोग्नु नपर्ने नैशर्गिक अधिकारको सुनिश्चत भएको देशमा दलित भएकोले नवराज बिकको ज्यान लिइयो । यो घटनाले हामी कस्तो समाजमा बाचिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न उठेको छ। छुवाछुतको बिषयमा थुप्रै नारा लयबद्ध रुपमा सुनिन्छन् तर व्यवहारमा यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिरहन्छ। सम्बन्धित निकायको ध्यान यस बिषयमा नपर्नु र परिहाले पनि महत्त्व नदिनुले नवराज जस्ता थुप्रै युवाहरुले जातभातको चपेटामा परेर ज्यान गुमाई रहेका छन्।
यो घटनामा पनि प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। पुरै गाउँनै उल्टिएर निहत्था युवाहरु माथि ज्यानै लिने गरि कुटपिट हुँदा पुलिसले घटनालाई नियन्त्रणमा लिन नसक्नु लज्जास्पद हो। आफ्नी प्रेमिकालाई बिहे गर्न भनेर लिन गएका युवा र उसका साथीहरुमाथि घेरा हालेर ढुंगामुडा गर्नु, घाइते बनाइनु, बाँधेर खोलामा फ्याँक्नेसम्म हुँदा प्रहरीले रोक्न किन सकेन ? त्यसैले प्रहरीले यो घटनाको छानबिन निष्पक्ष तरिकाले गर्छ भन्नेमा आश्वस्त हुन सकेका छैनन् पिडितका परिवार।
नवराज बिक यहि गुलाब जस्तै हुन्, फक्रिनु अघिनै संसार छोड्नु पर्यो। उनको आत्माले शान्ति पाओस!
निर्लज्जताको पराकाष्ठ त जनप्रतिनिधिको क्रियाकलापले देखायो। युवाहरुमाथि अन्दाधुन्दा आक्रमण गरिराखेका गाउँलेहरुलाई रोक्नुको सट्टा उनिहरुसंग संगै लागेर त्यस्तो अपराधिक क्रियाकलापमा सामेल हुने वडा अध्यक्षको हर्कत खेदपूर्ण छ। उनको त्यो क्रियाकलापले जनप्रतिनिधिको चेतनाको स्तर कति हद सम्म तल्लो रहेछ भन्ने कुरा त्यहींबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यहि संबिधानको आधारमा आफु जनप्रतिनिधि हुने अनि त्यहि संविधानले दिएको समानताको हकलाई लत्याउनेलाई हदै सम्मको कारबाही दिइयोस। वडा अध्यक्षको हैसियतले उनले यो घटनालाई शान्तिपूर्ण रुपमा समझदारीमा टुंग्याउन सक्थे। तर कसैको ज्यानै जाने गरि कुटपिट गर्ने घटनामा आफै संलग्न भए। उनि केवल हुनेखाने र कथित माथिल्लो जातका मात्र वडा अध्यक्ष होइनन्। उनलाई तिनै बिकहरुले पनि आफ्नो जनप्रतिनिधि मानेर भोट हालेका थिए होलान् तर आज उनले उनीहरुको भोटको पनि अपमान गरेका छन्। घटनामा संलग्न भएकाले कडा भन्दा कडा सजाय पाउनै पर्छ ता कि दलितले पनि स्वाभिमानी रुपमा बाच्न पाउन् र भोलि फेरी बिक भएकै आधारमा अरु कोहि नवराजले ज्यान गुमाउन नपरोस।
नेपाल २०६३ सालमै छुवाछुत मुक्त देश घोषित भैसकेको छ। मुलुकी ऐनले नै छुवाछुत दण्डनीय भनेको छ तर आजसम्म छुवाछुत र जातीय विभेद कायमै छ। समाजका हरेक समुदाय, जात, जाती, लिंग, धर्मका मानिसहरु समाजका सदस्य हुन्। ति सबै सदस्यहरुले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेर बस्दा समाजमा शान्ति र सद्भाव कायम रहन्छ। तर रुकुम पश्चिमको यो घटनाले यसो नभएको देखाएको छ। आफुलाई उपल्लो स्तरको भन्नेहरुले दलित समुदायको पहिचान स्वीकार नगर्दा रुकुम घटना घट्न पुग्यो। त्यो समाजको सामाजिक सद्भावमा असर पुग्यो। तर आफ्नो जस्तोसुकै पहिचान भएपनि स्वाभिमानको साथ् बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्यक नेपालीलाई छ। बिक नै भएपनि नवराजलाई पनि थियो। तर आफुलाई माथिल्लो जातको भन्नेहरुले त्यो स्विकार्न मानेन। तर कसैको ज्यानै लिनसम्म पछि नपर्ने जात, जात होइन ‘कु-जात ‘ हो।
यो घटनाले उजागर गरेको अर्को गहन बिषय हो बाल बिवाह। कागजी रुपमा बाल बिवाह गैर कानुनी छ। तर व्यवहारिक रुपमा यो अझै कायमै छ अझ भनौ कतिपय जिल्लाहरुमा जस्तै मकवानपुर, धादिङ् लगायतमा भागी बिवाह धेरै जसो बाल बिवाह नै हुने गरेको छ। नेपालको कानुनले बिवाह गर्ने कानुनि उमेर २० वर्ष तोकिएको छ केटा र केटी दुबैको हकमा।अभिभावकको रोहबरमा रहेर भने १८ बर्षको उमेरमा बिहे गर्न सक्ने प्राबधान छ। तर भर्खर २० बर्षका नवराज १७ बर्षीय उनकी प्रेमिकालाई बिहे गर्न उसको घर पुग्छन्।नवराज पहिलो व्यक्ति होइन जसले बाल बिवाह गर्न खोजे। ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार नेपालमा अझै ३७% केटीहरुको बिहे १८ वर्ष पुग्नु भन्दा पहिले र १०% को बिहे १५ वर्ष पुग्नु भन्दा पहिले हुने गरेको छ।बाल बिवाह अशिक्षित र पिछडिएको समुदायमा अझ बढी छ। तर देशमा कानुन छ, कानुन, नियम पालना भए नभएको निगरानी राख्ने निकायहरु छन्। प्रहरी, प्रशासन पहिले देखिनै छ र अब ता स्थानीय सरकार समेत भएको अवस्थामा पनि बाल बिवाह कायमै रहनुमा सम्बन्धित निकायको कमजोरी छर्लंग देखिन्छ।
राज्यका हरेक निकायको उपस्थिति छ, कानुन छ तर पनि अराजकता र दण्डहिनता उत्तिकै छ। रुकुममा घटेको यो घटना चरम उदण्डताको उदाहरण हो। तसर्थ, घटनाको छानबिन निष्पक्ष रुपमा हुन जरुरी छ। यो घटनालाई झडपको नाम दिएर दोषीलाई उम्काउन खोजिदैछ जुन सरासर गलत छ। निहत्था युवाहरुमाथि ज्यान लिने हिसाबले हमला गरिएको छ अनि झडप कसरी भन्न सकिन्छ ? मारिएका नवराज सहित उनका साथीहरुले न्याय पाए भने मात्र सबै जनताले राज्य भएको अनुभूति गर्न सक्छन्। निर्मल हत्याकाण्ड जस्तो यो घटना नबनोस। निर्मल हत्याकाण्डमा पनि समाजको पिछडिएका वर्गको सदस्य – महिला थिइन् भने यसपटक पनि सोहि वर्गको सदस्य- दलित समुदायका हुन्। निर्मलाले न्याय नपाए पनि नवराजले न्याय पाउंछन् भन्ने आश छ। उनि जस्ता अरु नवराजहरु र नवराजका बाबु आमा जस्ता अन्य दलित समुदायको सदस्यहरुले सरकार भएको र न्याय जीवित भएको अनुभूति गर्न पाउन्।
२०७७ जेष्ठ १६, १४: ५४: ४२